Ngabe uHunt ungumqeqeshi olungele iChiefs? | Scrolla Izindaba
Ngabe uHunt ungumqeqeshi olungele iChiefs?
Njengoba sekuphakathi nesizini akukho okukhombisa ukuthi iKaizer Chiefs isesimeni esihle.
Esikhundleni salokho kubukeka sengathi babuyela emuva, ngemuva kokukhishwa kwabo ku-Nedbank Cup muva nje ngabadlali be-Richards Bay.
Futhi AmaKhosi abuza lo mbuzo: isamba esilinganiselwa kwi-R500,000 njalo ngenyanga, ingabe iChiefs iyayithola inzuzo yemali yayo ngoGavin Hunt?
IChiefs isiqoqe amaphuzu ayi-18 e-premiership emidlalweni eyi-15, okungamaphuzu angaphansi kweyi-17 uma kuqhathaniswa nesizini edlule ngesikhathi esifanayo.
Ngesizini edlule iqembu belihamba phambili ngokukhululeka, kodwa manje selisendaweni yesi-8 etafuleni.
Ngesikhathi uHunt ethatha isihlalo esishisayo ngemuva kokuxoshwa kukaErnst Middendorp, abanye abantu bathi nguyena muntu ofanele lo msebenzi, abanye bathi isitayela sakhe asiwafanele Amakhosi.
Uqale kabi, wehla ngesikhathi ehlulwa ngamathathu eqandeni bebhekene neMamelodi Sundowns – futhi kusukela lapho bavele behle kakhulu – eqoqa amaphuzu amahlanu emidlalweni yabo emihlanu yokuqala futhi wehla ngamaphuzu ayi-10 kulokho.
Imidondoshiya yase-Soweto yakwazi ukuwina kathathu ngokulandelana, kodwa yabuye yaqala ukuhlehlela emuva.
Abaphathi beChiefs bayakuqonda ukuthi uHunt ubelokhu elwa nesikhinyabezi sokungakwazi ukuthenga abadlali abasha ngenxa yokunqatshelwa, kodwa lokho kunikeze uHunt izizathu uma iqembu lakhe lingenzi kahle.
Ngemuva kokukhishwa emqhudelwaneni we-Nedbank Cup emasontweni amabili edlule, iChiefs kubukeka sengathi izoqeda isizini ingawine lutho.
NgoLwesibili Amakhosi azokwamukela AmaZulu emdlalweni weligi ngemuva kokuphumula ngempelasonto. Umdlalo uzoqala ngehora le-3 ntambama e-FNB Stadium.